Madaxweynaha Jibuuti oo tababar u soo xirey 950 ciidamo oo Somalia dalkiisu u dirayo – SBC
Madaxweynaha Jibuuti oo tababar u soo xirey 950 ciidamo oo Somalia dalkiisu u dirayo
Madaxweynaha Jibuuti Ismaaciil Cumar Geele ayaa shaley tababar u soo xirey 950 askari oo lagu wado in ay dhawaan gaaraan magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya si ay uga qayb qaataan hawlgalka midowga Afrika ee la magac baxay AMISOM ee taageerada siinaya dawlada KMG Soomaaliya.
Ciidamadan oo ay ka mid yihiin tobeneeyo haween ah ayaa mudo afar bilood ah waxay tababaro ku qaadanayeen xerada tababarada ciidamada ee Cali Cunaay ee Gobolka Cafarta ee dalka Jibuuti iyadoo tababarkaasi ay bixinayeen tababarayaal u dhashay wadamada Mareykanka & Faransiiska, taasi oo qayb ka ah qorshe lagu doonayo in lagu baritaaro hawlaha midowga Afrika ee Soomaaliya.
Madaxweynaha Jibuuti Ismaaciil Cumar Geele & wasiirkiisa gaashaandhiga Maxamed Kaamir C/qaadir oo hadal ka jeediyey xafladii tababarka loogu soo xirayey ciidamadaasi ayaa sheegay in ciidamadan ay ku biirayaan ciidamada AMISOM ee midowga Afrika iyagoo ku tilmaamay kuwa taageero siinaya ummada Soomaaliyeed ee walaalaha ah, waxaana ay isku raaceen wasiirka & madaxweynaha dardaaran ay ciidamadooda ku siiyeen inay muujiyaan dhaqan wanaag & asluub ayna yihiin kuwa wakiil ka ah ummada Jibuuti.
Ciidamadan oo magacooda loo bixiyey “Guutada Hiil” waxaa Ismaaciil Cumar Geele oo magacaasi sharaxayey uu ku macneeyey in uu yahay Hiil ay u hiilinayaan ummada Soomaaliyeed oo uu sheegay inay ku sugan tahay dhibaato & qaxar mudo sanooyin ah la degay dalka.
Lama sheegin xiliga rasmiga ah ee ciidamadan ay tagi doonaan magaalada Muqdisho hase yeeshee waxaa laga shanqariyey mudo ay ku biiro doonana ciidamada kale ee AMISOM.